Ndingawana here PR high backlinks kubva kumakambani ekutengesa ekubatana?
Nhasi zvingaratidzika sezvinotyisa kune SEOs dzakawanda uye vashandi vekushandura webhuzha pazvinouya pane kukurukurirana kunowanzoenderana nehutano hwemashure nehutsva hwekutsvaga. Sei? Nokuti kazhinji kacho basa rokutora PR rakatsika shure pasina kuvhiringidza webhusaiti kana bhuroti ibasa rakaoma rakaoma. Kazhinji kazhinji, chinangwa chikuru che SEO ndechokuwedzera kuwedzera kweCTR, kukurudzira chitima, pamwe nekusimudza kushandurwa kwewebsite. Uye kana iwe uchida kuwana PR yakakwirira shure kwekambani yekutengesa-kune zvakawanda zvevarume vari kukwidza "mavhisi" avo pasi peWebhu - pano pane zvimwe zvidimbu zvinotonhora pamusoro pekubhadharwa kwechikwata chekuvaka. Chinhu ndechekuti Google inogona kuona dzimwe nguva zvinhu zvinoshusha zvichiitika newebsite yako kana blog (i. e. , guru guru rinowanikwa zvakaderera rakabhadhara backlinks, rinoshandisa zvinyorwa zvakavanzika, zvinyorwa zvepammy, uye mamwe maitiro kana zvirongwa zvinonyengera zve badass Black-Hat uye Grey-Hat SEO). Tichifunga nezvezvakaipa zvakanyanya apo iwe unowana PR yakakura shure kumashure kubva kune vamwe vasinganyengeri (i. e. , yakaderera-nheyo mazita, automated forum subscriptions, mapurisa ekubatanidza uye mavhiri mavhiri - a. k. a. kusiyanisa kugoverana) - zvose zvinogonawo kuguma nekuparadzwa. Ndinoreva kuti webhusaiti yako inogona kurambidzwa kubva pakutsvaga kwekutsvaga kamwechete uye nokusingaperi. Saka, kufunga nezvekukuvadza kwakanyanya pasi pano kunouya zvinhu zvose zvaunofanira kuziva pamusoro pekubhadhara backlinks, mhando dzakakura dzekunyoresa zvikwereti uye kuti ungazvidzivirira zvakanakisisa sei, kunyanya zvinowanzoitika.
Mhando Dzokugadzirisa Mutemo
Pane chimwe chinhu, ngatitarisei - iyo inowanzomiswa panzvimbo yepasi pose. Tichifunga nezvekukanganisa kunowanikwa nekutengesa kana kutengesa backlinks, pane zvitatu zvakasiyana zvekunyoresa zvikwereti - chikamu chechikamu, nzvimbo-yakazara chirango, uye kukwaniswa kubviswa.
Mitezo yakasarudzwa - inomirira chirango chekutungamirira kutengesa webhusaiti kana blog pane zvitsvakurudzo. Zvinowanzoitika apo Google inoona basa risinganzwisisiki rechokwadi re spammy, rinowanzoenderana nekubata nemashoko akawanda uye keyphrases - kungoputira mamwe traffic, uye pasina kupa chero zvakakosha kukosha nejiji cheji.
Chirango cheShoko-Wese - icho chingava chinetso chakakomba nemigumisiro yakaoma. Nekugona kukwanisa kuvhara kusvika hafu yehutano hwako hwewebhu, rudzi urwu rwekutsvaga chirango chinowanzoshandiswa kana zvasvika pakushandisa Grey-Hat backlinks, somuenzaniso nechechi dzakachengetwa, zvisingatauriki kana kuti kwete kunyange zvakakwana zvepamutemo zvinodhaka zvakadai semishonga, upombwe kana kubhejera. Kana uri kutarisana ne-low-quality link mutengesi anovimbisa kuti awane PR high backlinks kune webhusaiti yako - inenge pasina nguva - inguva yekudedera. Sezvo iwe zvichida uri kuenda kukwerera mureza mutsvuku neGoogle uye unoshandisa chikwata.
Kuzadzisa Kuzadzisa - kunotaura pachako. Ndinoreva kuti kuenda kunoshandiswa kumashure kumashure kunogona kuita chinhu chakaipisisa. Ndinoreva nzira yakaipa zvikuru yezviitiko apo webhusaiti yako kana bhulogi inoshungurudzwa nezvekukutukurwa zvakanyanya neavo vasina kukodzera kubatanidza matanho kana maitiro ekutengesa - uye zvinongodzingwa kunze kwetsva yekutsvaga. Kazhinji kazhinji, mugumisiro wakadaro usina kufara uri kusvika kusvika pasi pehutano hwakatengeserana "kutengesa" makambani ", uye" avo " Source .